Abuu Zubeyr: Waxaa la doonayaa in dhulka Soomaaliya loo kala qeybiyo Kenya iyo Itoobiya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Abuu Zubeyr: Waxaa la doonayaa in dhulka Soomaaliya loo kala qeybiyo Kenya iyo Itoobiya
10th March 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Hogaamiyaha Alshabaab Abuu Zubeyr ayaa cajal maqal oo uu soo duubay uga hadaly duulaanka ururkiisa ka dhanka ah ee ay hogaaminayaan ciidamada Itoobiya eek u biiray AMISOM, kaasoo ka bilowday koonfurta Soomaaliya.
Hogaamiyaha Alshabaab ayaa sheegay in duulaanka ciidamada Itoobiya kusoo qaadeen Soomaaliya yahay mid lagu doonayo in inta ka hartay dhulka Soomaaliya lagu hoos geeyo dalalka Kenya iyo Itoobiya.
Abu Zubeyr ayaa isku xiray dagaallo horay u dhexmaray Soomaaliya iyo Itoobiya iyo dagaalka hadda ku socda Alshabaab, wuxuuna yiri “Xabashidu waxey ku soo duushey Soomaaliya qarnigii 18-aad, Waxay duulaan ku ahaayeen Amiirkii Axmed Gurey, waxaa ku xigey Qarnigii 19-aad dagaalkii Ingriisku ku soo qaadey Soomaaliya kuwaas oo u adeegaya Mililikhii Itoobiya, waxaana dhaxalkii dagalkaasi noqdey ayuu yiri in Soomaaliya qaybo ka mid ah la siiyey Kenya iyo Itoobiya”.
Wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya ee hadda jirta iyo dowladaha Kenya, Itoobiya iyo Uganda ay heystaan mushkilado gudaha ah, wuxuuna dowladda Soomaaliya ku eedeeyey iney Itoobiya dalka kusoo hogaamisay.
Abu Zubeyr ayaa sidoo kale la hadlay raga u dagaallama Alshabaab wuxuuna ugu baaqey in aan Islaamka dhankooda looga soo dhicin ee ay dagaalka adkeystaan “Yaanu askeri Tigree ah oo masaafo dheer idiinka yimid idinka sabur badnaanin ee adkeysta” ayuu yiri.
Waxa uu sheegay in Amiirkooda guud ee Zawaahiri eek u sugan dhulka Khuraasaan sida uu yiri uu ka sugaayo war uu ku farxo oo ah in la jebiyo ciidamada Itoobiya.
Amiirka Al-Shabaab ayaa ugu baaqay Shacabka Soomaaliyeed in ay ka qeyb qaataan Dagaalada ay kala horjeedaan Ciidamada Itoobiya, waxa uuna intaa raaciyay in duulaanka Itoobiya yahay mid lagula dagaalamayo ku dhaqanka Shareecada Islaamka.
Alshabaab ayaa wajahaya dagaal culus oo ay isugu tageen cidiamada 6 dal oo Afrikaan iyo ciidamada dowladda Soomaaliya.